Nagu saabsan - Linqing Xinri Precision Bearing Co., ltd.
LINQING XINRI GO'AANKA XAALINTA XINRI., LTD waa soo -saare ku takhasusay qoyska tan iyo sannadkii 2006. Falsafaddayada: ku hel kalsooni daacadnimo, ku guulayso tayo, kobci hal -abuurnimo, oo samee fursadahayaga annaga oo adeegsanayna ruux dhiirran.
Sifooyinkaasi si fiican bay noogu adeegeen, iyagoo XRL ka helay sumcad xoog leh oo ka dhexaysa lamaanayaasha iyo macaamiisha daacad u ah. Natiijo ahaan, XRL CO., Waxay leedahay shabakad iibsi iyo qaybinta qaybinta si wanaagsan u dhisan laakiin si xawli ah u koraysa, gudaha iyo dibaddaba.
Iyada oo iibka sanadlaha ah ee adduunka in ka badan US $ 150 milyan iyo awoodda sanadlaha ah ee gudaha in ka badan 7000 milyan oo xirmooyin ah, tas-hiilaadka guud ahaan ka badan 2 milyan oo cagood oo laba jibbaaran, XRL waa mid ka mid ah soosaarayaasha waaweyn ee dhalidda adduunka. Dhab ahaantii, XRL waxaa hore loogu iibiyay in ka badan 120 dal oo adduunka ah. Hadday tahay wax-soo-saarka beeraha, dharka, macdanta, daabacaadda codsiyada kala duwan ee garoomada diyaaradaha, nidaamyada qaboojiyaha, gudbinta aaladaha, saldhigga korantada maraakiibta, alaabta lagu ciyaaro ama qalabka Caafimaadka, Baabuurka, XRL ma metelaan wax ka yar qiimaha ugu wanaagsan ee qaybta suuqa dhammaadka-dhexe . Dhanka kale, XRL waxaa sidoo kale lagu xusey heerka ugu sarreeya, wax-qabadka leh, adeegga 24/7/365-dhammaan emaylka iyo farriimaha codka waxaa lagu soo jawaabaa lix saacadood gudahood, waa la dammaanad qaaday!
Adeega iibka kadib oo wanaagsan: (12 bilood oo dammaanad tayo leh, lacagta waa la jari karaa ama waa la soo celin karaa haddii dhibaato kasta oo tayo leh oo la isticmaalo xaalad caadi ah).
Adeegga OEM/Customized waa la soo dhaweynayaa.
7X24 saacadood oo taleefan ah ama taageero tiknoolajiyadeed oo onlayn ah oo bilaash ah.
(1) Waxaan leenahay qalab tijaabo oo heerka koowaad ah si aan u ogaano xambaarsan xuduudaha xogta kala duwan oo aan xakameyno tayada dhalista.
Mar kasta oo wax -qabadku ay tahay in marka hore la ogaado in tayada ay tahay mid tayo leh iyo in si aan toos ahayn loo tirtiro.
Markaa waxaan heli karnaa kalsoonida macmiil weyn, waxaanna siin karnaa dhowr sano.
(2) Waxaan leenahay awooddeena R&D ee u gaarka ah, si aan macaamiisha uga caawino xallinta mushkiladda sahayda aan caadiga ahayn.
Waxaan sidoo kale ku beddeli karnaa shuruudaha macaamiisha si ay u beddelaan sumaddooda.
(3) qiimaha, waxsoosaarkayagu wuxuu hubiyaa in qiimaheena guud ahaan Shiinaha uu yahay mid tartan badan.
Waxaa kuu wanaagsan inaad isbarbardhigto qiimaha iyo tayada alaab -qeybiyeyaasha.
Laakiin qof walba waa ogyahay inaadan ku iibsan karin alaabada tayada ugu sareysa leh qiimaha ugu hooseeya,
laakiin badeecadeenu waa tayada ugu fiican haddii aad isticmaasho qiimo isku mid ah.
(4) Tayada xiritaanka XRL: ka sarreeya heerka caadiga ah ee ISO: 9001 iyo Gost.
Waxaan leenahay khad wax -soo -shiid oo si buuxda otomaatig ah iyo khadadka isu -imaatinka oo leh qalab tijaabin oo otomaatig ah kaas oo tayada tayada ka dhigaya mid aad u sarreeya. Waxaan ka dhignaa sahayda 100% tijaabiyey.
teknolojiyadda duudduuban ee u gaarka ah ee geedi socodka leexashada taas oo hagaajinaysa xoogga siddooyinkii dhalista iyo nolosha dhalidda iyada oo si fiican loo habeeyay qaab dhismeedka biraha iyo xarriiqda birta.
Iyo teknolojiyadeena cusub ee nitriding -ka cusub ee loogu talagalay giraanta gudaha iyo dibedda iyo qafiska taas oo ka dhigaysa waxqabadka wanaagsan iyo cimri dhererka raadkayaga.
Hal -ku -dhegga ayaa halkan yimaada
Tayada marka hore,
Macaamilka Marka Hore.
Si aad u noqoto No No. One in the World Bearing Industry
Dhis meheradda caanka ah ee adduunka oo Abuur sumadda ugu sarreysa globle ee Shiinaha
Had iyo jeer ku adkayso tayada sare, taabashada iyo qiimayaasha macquulka ah
Xirfadaha & Khibradayada
1. Dhammaan hababka soo -saarka, sida been -abuurka, leexashada, daaweynta kulaylka, shiidi, ururinta iyo xirxirida, ayaa lagu dhammeeyaa warshadeena. Taasi waa sababta XRL Bearing ay kuugu siin karto kubbadda saxda ah iyo taayirrada rullaluisyada qiimaha ugu hooseeya ee suurtogalka ah waxayna la kulmi kartaa dhalmada waqtigeeda.
2.Asagoo ah ISO9001: 2000 soo -saare shahaado haysta, waxaan dhidibnay nidaam raad -raac badeecadeed. Ka sokow, XRL Co., waxay leedahay koox farsamo oo xoog leh oo leh injineer Japan ah si ay u xalliyaan dhibaatooyinka kala duwan ee dalabka iyo adeegsiga tilmaamahayaga.
Waxaan bixinnaa saamiyo kala duwan oo buuxa oo ay ka mid yihiin saa'idka duubista duubista, saa'idka kubbadda qotada dheer, barkimooyinka xannibaadda barkimooyinka, saa'idka rullaluistemadka cylindrical, saa'idka rullaluistemadka Spherical, saa'idka dhaadheer ee isweydaarsiga, dhejiska xarunta Wheel iyo kuwa kale.
Maxaad noola macaamilaysaa?
1. Waxaan haysannaa qalab tijaabo oo heerka koowaad ah si aan u ogaano xambaarsanaanta xogta kala duwan oo aan xakameyno tayada sita.
2. Waxaan leenahay awooddeena R&D ee u gaarka ah, si aan macaamiisha uga caawino xallinta mushkiladda sahayda aan caadiga ahayn.
Xageen u dhoofinaa?
Marka laga reebo iibinta gudaha, xiritaanka XRL wuxuu mar hore u dhoofiyay in ka badan 120 waddan iyo gobollada dibedda oo ay ku jiraan Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Algeria, Saudi Arabia, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Peru, Bolivia, Chile , Kenya, Zambia, Mareykanka, Canada, Mexico iwm.
Wax kasta oo aad rabto inaad nagu ogaato